NBUDATA VIDIYO ỌHỤRỤ XBOOT - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọtụtụ mgbe mgbe ị na-arụ ọrụ na faịlụ vidio, ọnọdụ nwere mgbe i kwesịrị isonyere ọtụtụ faịlụ ma ọ bụ otu faịlụ. Iji dozie nsogbu a, ụfọdụ ndị ọrụ na-enyere aka nke mmemme "arọ," n'ụzọ ọ bụla nke okwu ahụ, ma otu usoro ihe dị mfe ga-enyere aka mee ka ọ bụghị naanị gluu vidiyo, kamakwa ọtụtụ ihe.
Ọ dị mfe jikọọ vidiyo na Master Video, usoro ihe a na-enye ha nzacha ma mee di na nwunye ihe ndị onye ọrụ ahụ ga-arụ. Ka ọ dị ugbu a, ka anyị hụ otú otu ihe ahụ si jikọọ ọtụtụ vidiyo na usoro Videomaster.
Nbudata videomaster kachasị ọhụrụ
Nke mbụ, onye ọrụ kwesịrị itinye vidiyo na usoro ahụ ọ chọrọ ijikọ. Ịnwere ike ịgbakwunye faịlụ na ụzọ dị iche iche, otu n'ime ha na-ebudata na Intaneti, ma ọ bụrụ na ị ga-ejikọta na vidiyo ndị a na-akọrọ, ma ọ gaghị ebudata.
Nhọrọ nke omume
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ ihe na vidiyo. Enwere ike iwepụta faịlụ, tinye ihe ọhụrụ, tinye nhazi, ma maka oge ahụ, naanị anyị nwere mmasị ịbanye. N'igosi faịlụ vidiyo niile dị mkpa, ịnwere ike pịa bọtịnụ "Jikọọ" n'enweghị nsogbu.
Mgbe ahụ, onye ọrụ ahụ ga-ahọrọ njedebe nke ọhụrụ vidiyo ga-enwe, jikọtara na ọtụtụ ndị gara aga.
O kwesịrị ịtụle na a ga-edozi faịlụ ọ bụla na ụzọ a kapịrị ọnụ, ya mere ntughari ahụ nwere ike iwe ogologo oge.
Tupu oge ikpeazụ ị ga-ahọrọ folda ebe ị kwesịrị ịchekwa vidiyo ahụ. Ihe nchekwa ahụ nwere ike ịbụ nke ọ bụla, dịka ọ dị mfe maka onye ọrụ ahụ.
Mgbe niile omume ndị a kọwara n'elu, ị nwere ike pịa bọtịnụ "Tọghata". Mgbe nke a gasịrị, usoro ịgbanwere ntọghata ga-amalite, nke nwere ike ịnwụ ọtụtụ awa, ma na njedebe onye ọrụ ahụ ga-enweta vidiyo buru ibu na kpọmkwem nhazi nke ọ chọrọ ịhụ ya.
Ijikọta vidiyo na Master Video bụ nnọọ ihe dị mfe. Ihe isi ike nke ọrụ ahụ bụ n'eziokwu na onye ọrụ ahụ ga-echere oge buru ibu tupu e kesaa ibe nke vidiyo ọ bụla ma ha niile ga-ejikọta ya na otu faịlụ.